यसरी बित्छ मुख्यसचिवको एक दिन – रोल्पा समाचार
२०७२ पुष ८, बुधबार १७:१५ गते
यसरी बित्छ मुख्यसचिवको एक दिन
रोल्पा समाचारदाता on २०७२ पुष ८, बुधबार १७:१५ गते
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी आजभोलि निकै व्यस्त बनेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय र कर्मचारीतन्त्रको तालमेल मिलाउनु पनि पर्ने र प्रत्येक साता बस्ने ‘क्याबिनेट मिटिङ’को संयोजन गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनको व्यस्तता बढेको हो । आफ्नो समय कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त, देशका कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख व्यक्ति रु सुवेदीले आफ्नो दैनिकी नयाँ पत्रिकाका सागर पण्डितलाई सुनाए :
साउनदेखि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी समालेपछि मेरो नियमित दिनचर्या पनि फेरिएको छ । कहिलेकाहीँ आइपर्ने आकस्मिक काममा अन्यत्र जानुपर्दाबाहेक म आजभोलि अधिकांश समय कार्यालयमा नै बिताउँछु । कार्यालयमा पर्ने कामअनुसार मेरो रुटिन पनि दिनहुँजसो फेरिन्छ ।
सामान्यतया म बिहान ६ बजेसम्ममा उठिसक्छु । नित्यकर्म सकेपछि केही समय ‘एक्सरसाइज’का लागि छुट््याउँछु । पहिले म बिहान आधादेिख एक घन्टासम्म नियमित ‘मर्निङवाक’ जान्थेँ, तर अहिले ‘मर्निङवाक’का लागि समय निकाल्न सकेको छैन । तैपनि, म घरमै सामान्य ‘एक्सरसाइज’ गर्छु ।
त्यसपछि मात्र म चिया पिउँछु । प्रत्येक बिहान कालो चियाबाट मेरो दिन सुरु हुन्छ । बिहानै चियासँग अरू केही लिन्नँ । चिया पिउँदा मसँग हातमा पत्रपत्रिका पनि हुन्छन् । देशको समग्र अवस्थाबारे ‘अपडेट’ हुन प्रत्येक दिन म पत्रपत्रिका पढ्छु ।
आवश्यक परेमा र समयले साथ दिएको खण्डमा म महत्त्वपूर्ण ‘डकुमेन्ट’ तथा प्रस्तावहरू पनि बिहान नै हेर्छु, त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयको पनि अध्ययन गर्छु । बिहान म भेटघाटलाई खासै प्राथमिकता दिन्नँ । तर, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेटघाटका लागि भने अरू विकल्प हुँदैन । कहिलेकाहीँ भने बिहानै मिटिङका लागि निस्किनुपर्ने हुन्छ । घरमा कालो चिया खाएपछि मात्र म त्यस्ता मिटिङमा जान्छु ।
मलाई घरबाहिरको खाना खानुनपरे हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । त्यसैले, सकेसम्म म घरमै खाना खाएर बाहिर निस्किन्छु । बिहान नौ बजेको कार्यक्रममा जानुपर्ने दिनमा पनि म साढे आठ बजे नै घरमा खाना खाएर निस्किन्छु । त्यहाँभन्दा अगाडि नै घरबाट निस्किनुपर्‍यो भनेचाहिँ घरमै खाना खान सम्भव हुँदैन । त्यस्ता दिनमा मेरो खानाको कुनै टुंगो हुँदैन ।
कुनै विशेष कार्यक्रममा जानुपर्नेछैन भने म सामान्यतया पौने नौ बजे खाना खान्छु । खानामा मलाई सामान्य दालभात, तरकारी मन पर्छ । गाउँघरमा जन्मँे, हुर्केँ । त्यसैले पनि होला, मलाई बाहिरको खानामा त्यति रुचि जाँदैन । घरमा पनि अनेक परिकारमा भन्दा सादा दालभात, तरकारीमा नै मेरो रुचि बढी हुन्छ । मलाई तरकारीमा नुन धेरै भएको मन पर्दैन । तर, भातसँग दूध भने चाहिन्छ । सानैदेखि भातसँग दूध खाने भएकाले होला, दूध भएन भने खानाको धित नै मर्दैन ।
खाना खाएपछि म कार्यालयका लागि तयार हुन्छु । बिहान नौदेखि सवा नौ बजेभित्र प्राय: सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पुगिसकेको हुन्छु । कार्यालयमा आएपछि नियमित कार्यमा जुट्छु । खासगरी सरकारले अघि सारेका विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमको अवस्था र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रमुखहरूसँग जानकारी लिने गर्छु । सरकारको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुपर्नेमा सचिव–सहसचिवहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने गरेको छु ।
आफूलाई खट्केका कतिपय विषयमा साथीहरू तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बसेर छलफल गरी उपयुक्त निकाससमेत निकाल्ने गरेको छु । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा नै विभिन्न समस्या र गुनासा लिएर आउनेलाई म नियमित रूपमा नै भेटको अवसर दिन्छु र उनीहरूका गुनासा र मागका बारेमा चासो दिएर सुन्ने र समाधानको पहल गर्छु ।
मुख्यसचिव भएपछिका झन्डै दुई महिना सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका खाकासहितको दुई वर्षे कार्ययोजना बनाउनमै बढी व्यस्त भएँ । घरमा पनि यही कामलाई प्राथमिकता दिन्थेँ । कतिसम्म भने, दसँै र तिहारको बिदाको समयलाई पनि मैले कार्ययोजना बनाउन नै उपयोग गरेँ । सरकारले त्यो कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसैले, अहिले कार्यालय पुगेपछि मेरो पहिलो काम त्यो कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयहरूमा काम भए–नभएकोबारे बुझ्ने भएको छ । त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण लिने काम पनि ‘फस्र्ट आवर’मै गर्छु ।
कहिलेकाहीँ कार्यालय समयमा नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ । त्यस्ता बैठकको गाम्भीर्यता र महत्त्व बुझेर म जाने–नजाने निक्र्योल गर्छु । कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बोलावट हुन्छ, म जान्छु । कहिलेकाहीँ म आफैँ जान्छु र आवश्यक ‘ब्रिफिङ’ गर्छु ।
कामको व्यस्तताले दिउँसो कार्यालयमा खाजा खानकै लागि छुट्टै समय दिन सक्दिनँ । आगन्तुकलाई चिया खुवाउने चलन छ, त्यही समयमा म पनि चिया खान्छु । चियासँगै कहिलेकाहीँ बिस्कुट पनि लिन्छु । भेटघाट बढी हुने भएकाले दैनिक कम्तीमा पनि ८–१० कप चिया खानुपर्ने हुन्छ । धेरै चिया खानुपर्ने भएकाले म कालो चिया ‘प्रिफर’ गर्छु, ‘विदआउट सुगर’ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने दिन भने मेरो ‘रुटिन’ बेग्लै हुन्छ । आजभोलि प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । त्यसैले, बिहीबारका लागि मैले अलिक धेरै तयारी गर्नुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर बैठकको समय तय गरिएको हुन्छ । त्यहीअनुसार म आफू पनि तयार हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पठाएका प्रस्ताव कानुनविपरीत छन् भने त्यस्ता प्रस्तावलाई हामी मन्त्रिपरिषद्मा ‘फरवार्ड’ नै गर्दैनौँ ।
महत्त्वपूर्ण बैठक तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक नभएका दिन म सामान्यतया साँझ ६ देखि आठ बजेसम्ममा घर पुगिसकेको हुन्छु । घरमा पुगेर ‘फ्रेस’ हुन्छु । त्यसपछि ‘डिनर’का लागि तयारी हुन्छु । साढे आठ बजेसम्ममा मैले ‘डिनर’ लिइसकेको हुन्छु । डिनरमा पनि बिहानको जस्तै दालभात, तरकारी नै खान्छु । साँझ पनि मेरो खानामा
दूध छुट्दैन ।
खाना खाइसकेपछि केही समय म दिनभरका घटना र विषयबारे ‘अपडेट’ हुन टेलिभिजन हेर्छु । बिहान पढ्न मन लागे पनि नभ्याएका केही पत्रपत्रिकाका लेखहरू भने पढ्छु । कहिलेकाहीँ त साँझमा पनि कामसँग सम्बन्धित ‘डकुमेन्ट’हरू पढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि म समय दिन्छु । दश बज्दा–नबज्दै म ‘बेड’मा पुगिसकेको हुन्छु ।
मुख्यसचिव भएपछि घरपरिवारलाई समय दिएर घुम्न पाएको छैन । चाहना हुँदाहुँदै पनि घरपरिवारलाई समय दिन नसकिँदो रहेछ । कहिलेकाहीँ बिदामा भने म दिनभर घरपरिवारलाई समय दिन्छु ।
श्रीलंकासँग नेपाल पराजित, ११ खेलमा गोलरहित
राजेन्द्र महतोले नाका थुन्न मधेसी सांसदलाई लिखित उर्दी पठाए
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ श्रावण २६, मंगलवार ०३:२९ गते २०७८ श्रावण २६, मंगलवार ०३:३० गते
राेल्पा समाचारदाता वडचाैर राेल्पा साउन २६ नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा लुंग्री गाउँपालिका ४ को वडा स्तरी स्तरीय भेला तथा बैठक तथा...
अनिवार्य छात्रा–छात्रहरुले पालना गर्नुपर्दछ ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७३ पुष २३, शनिबार १६:२४ गते
रोल्पा समाचार साप्ताहिक २०७३ पुस २४ मा प्रकाशित रेडक्रस एउटा आपत विपतमा सहयोग गर्ने सँस्था हो । जसको आधार भनेको जुनियर...
“आमाकै देन हो म चित्रकार बन्नमा”-रामचन्द्र श्रेष्ठ
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ माघ २७, शनिबार १४:३९ गते २०७६ बैशाख १६, सोमबार ०५:४३ गते
२०७४ माघ २८ माकला क्षेत्रप्रति समाज र राज्यको दृष्टिकोण, चित्रकला यात्राका आरोह–अवरोह, कला क्षेत्रका चुनौती र अनुभव लगायत चित्रकलाप्रति युवायुवतीको आकर्षणको...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ मंसिर २, शनिबार १५:३५ गते
जनवादी कलाकार जसले विगतको आमूल परिवर्तनमा गीत संगीतको माध्यमबाट जनतालाई तत्कालीन राज्यसत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्दै जागरण अभियानमा...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ मंसिर ८, शुक्रबार ०३:०० गते
पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका प्रदेश सभाका नेपाली काँग्रेस पार्टीका सामानुपातिक उम्मेद्वार एवम् नेपाली काँग्रेस पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधी...